Andrea Pirlo oo ka sheekeeyay waxa ay uga kala dhignaayeen waayihiisii Juventus & AC Milan – Gool FM
Andrea Pirlo oo ka sheekeeyay waxa ay uga kala dhignaayeen waayihiisii Juventus & AC Milan
(Brescia) 30 Maarso 2018 – Jeer ay berritoole foolka isku diirayaan Juventus iyo Milan, ayuu Andrea Pirlo nooga sheekaynayaa waxa ay uga dhignaayeen labadan kooxood oo ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee uu kusoo qaatay waayihiisa ciyaareed.
Laacibkan ayaa kaddib markii ay Rossoneri ka caga jiiddey inay u saxiixdo qandaraas sanad ka badan, wuxuu qaab bilaash ah ugu biiray Juventus sanaddii 2011-kii, wuxuuna aasaasi u noqday dib usoo noolaanshiyaha kooxdaasi oo ay xilligaa ka jajabnayd, balse kaddib 6 sano oo xiriir ah horyaalka nusatay.
“Funaanadda Milan waa wax igu gaar ah, oo qiime leh, waayo waxay ahayd funaanaddii i siisay waaya jooggii ugu horreeyay ee dhab ah dhanka xirfadda sare ee kubadda cagta,” ayuu Pirlo u sheegay Sky Sport Italia.
“Waxaa Rossoneri ku qaatay 10 sanadood, nasiib baana lahaa inaan kooxdaasi kula guulaystey koob kasta. Had iyo goorna abaal baan u hayn doonaa funaanaddaasi.
“Juventus waxay iiga dhignayd dhayidda xaalad xasaasi ah. Waxaan imid koox si wanaagsan loo maamulo oo guul u baahan, aniguna kaddib 10 sano oo aan Milan joogey, hardan cusub baan u baahnaa.” ayuu raaciyay.
Dekedda VS Gaadiidka' Kooxda Yuu Cali oo doonaysa in hoggaanka ay sii dheeraysato